Multivitamins & Probiotics & Montmorillonite ity mihaona vokatra fenitra hiandry ny fahadiovana Production: fahazoan-dalana: Ji Si Tian (2017) H01021 License Number: Ji Si Tian Zi ((2017) 124004 Product Standard No.:Q/01HDB 03-2017 Product Name: samy hafa firenena Feed Additive-Vitamin E3 + Calcium Propionate (TM1) entam-barotra Name: Hua Bei tuo Mei Bao Product fanaovana fanadihadiana antoka sarobidy: Per kilao vokatra afa-po: vitamina E3 ≥ 200.000 iu Calcium propionate ≥ 5g hamandoana ≤ 12.0% arsenika ≤10mg Aflatoxin B1≤10mg Ing ...
Izany vokatra mihaona hiandry ny fahadiovana fitsipika
Production: fahazoan-dalana: Ji Si Tian (2017) H01021
Product Name: samy hafa firenena Feed Additive-Vitamin E3 + Calcium Propionate (TM1)
Entam-barotra Name: Hua Bei tuo Mei Bao
Product fifehezan fanadihadiana antoka vidiny:
Per kilao vokatra afa-po:
Vitaminina E3 ≥ 200.000 iu Calcium propionate ≥ 5g hamandoana ≤ 12,0%
Arsenika ≤10mg Aflatoxin B1≤10mg
Ingredient: Vitamin D3, kalsioma propionate, Saccharomyces cerevisiae sela manda, montmorillonite.
Fonosana: 1kg / kitapo
Endri-javatra: Vitamin E3 afaka hisakana ny fiasan'ireny hampiroborobo ny ara-dalàna ny kalsioma sy phosphore ao amin'ny tsinaikely. Kalsioma propionate dia fungicide izay afaka misakana fahana maty fotsy amin'ny alalan'ny famokarana asidra propionic maimaim-poana. Niara lo ny kalsioma dia afaka manampy ny biby amin'ny kalsioma sy vitaminina ny fitambaran'ny E3 dia afaka mampitombo ny kalsioma sy ny hisakana ny fiasan'ireny utilisation.
Ny sela mitondra Saccharomyces cerevisiae rindrina sy ny montmorillonite afaka potipotika sy adsorb mycotoxins dia avy ny mycotoxins ao amin'ny fahana tsy variana anilan'ny faty, ary haingana excreted avy amin'ny vatana.
Ampiasao ity dia afaka manampy entana E3 vitaminina sy kalsioma, ka manana ny vokatry ny maty fotsy, maty fotsy. Ny vola dia toy izao manaraka izao:
Fahano isaky ny taonina amin'ny fahana
Pregnancy, Lactating mamafy
1.5 ~ 2Pj
Double fampiasana rehefa maty fotsy no lehibe ao amin'ny fahana
Biby fiompinao, Ondry
Talantalana Life: fiainana talantalana dia 18 volana.
Fitehirizana: Store ao amin'ny maizina, mangatsiaka, karankaina.
akoho amam-borona Vitamin Veterinary Fitsaboana
vitaminina ho valim-pitia Weight
Ampicillin Sodium for tsindrona
1% Ivermectin tsindrona